जलविद्युतमा नाफा कमाउन ‘मेगा आयोजना’ चाहिँदैन ! - UrjaKhabar जलविद्युतमा नाफा कमाउन ‘मेगा आयोजना’ चाहिँदैन ! - UrjaKhabar
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाले प्रक्षेपण गरे बमोजिम विद्युत उत्पादन नगर्दा प्रवर्द्धकहरू निराश हुने गरेका छन् । आय–आर्जन गर्न नसकी आयोजना टाट पल्टने स्थितिले यस क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित हुने संकेत देखिएको छ । १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा लगानी गर्न नसकिने स्वयं बैंकरहरू र साना आयोजनाका प्रवर्द्धकले बताउन थालेका छन् । जुन दुर्भाग्य हो ।
यद्यपि, निजी क्षेत्रका आयोजनाको २०५८ सालदेखिको इतिहास र तथ्य हेर्दा १० मेगावाटभन्दा सानाको संख्या र योगदान उल्लेख्य छ । निजी क्षेत्र सफल हुँदै आउनुमा साना आयोजनाको योगदान बिर्सन मिल्दैन । यसको ठाउँ ठूलाले लिन सक्ने अवस्था पनि होइन । १८३ किलोवाटको स्याङ्गे खोला, ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती–तीन, ३ मेगावाटको पिलुवा खोला जस्ता आयोजना सफलताका आधार हुन् । त्यतिबेला बैंक तथा लगानीकर्ताले खोलामा लगानी गर्ने कुरा पत्याउँदैन थिए । पिलुवा अहिले निर्माण भइरहेका आयोजनाभन्दा प्रतिकूल परिस्थितिमा बनेको थियो । र, ३ वर्षमै बैकको ऋण तिर्यो ।
पिलुवा नै पहिलो निजी जलविद्यत आयोजना हो, जसले बैंक तथा लगानीकर्ताको विश्वास जितेको थियो । जलविद्युत आयोजनाले पनि अन्य उद्योगले जस्तै समयमा ऋण तिर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेको थियो । जलविद्युत आयोजनाले लगानीकर्तालाई मुनाफा ख्वाउन सक्छन् भन्ने प्रमाण पिलुवा नै हो । स्याङ्गेले पनि समयमै ऋण तिरेर आजसम्म वार्षिक १०–१५ प्रतिशतसम्म मुनाफा बाँड्न सकेको छ ।
पछिल्लो समय आर्थिक हैसियत गुमाउदै गएर रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेका आयोजनाको संख्या बढ्दैछ । आयोजना रुग्ण हुनुका पछाडि प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा प्रमुख तीन कारण जिम्मेवार छन् । निजी आयोजना सफल बनाउने कडी पनि यिनै तीन पक्षसँग छ ।
एक : नीतिगत सुधार
राज्यले लिने आर्थिक तथा औद्योगिक नीतिले देशको समग्र समृद्धि तथा विकासलाई निर्धारण गर्ने गर्छ । निजी जलविद्युत आयोजना रुग्ण हुनुमा नीतिगत अस्पष्टता, त्रुटि, अन्योलता, अदूरदर्शिता, समन्वय अभाव तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयमा सरकारी उदासिनता मुख्य हुन् । यसको प्रत्यक्ष मार निजी आयोजनालाई पर्दै आएको छ । सरकारैपिच्छे नीति–नियम तथा कार्यविधि परिवर्तन गर्ने, प्रतिबद्धता जनाउने तर पूरा नगर्ने प्रवृत्तिले नीजि क्षेत्र ‘बलीको बोको’झैं भएको छ । सरकारले विभिन्न समयमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा किन हुँदैन ? सरकार र मातहतका निकायले जलविद्युत जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
परिस्थिति विश्लेषण गर्दा निजी क्षेत्रलाई सरकारका सबै निकाय मिलेरै घेराबन्दी गरे जस्तो महसुस हुन्छ । विद्युत विकास विभागको काम कर्तव्य तथा अधिकार शुल्क लिएर लाइसेन्स मात्रै जारी गर्ने, चाहे आयोजना हिमालमै किन नहोस् । वन तथा निकुञ्जको सहमति वा स्वीकृतिमा त्यतिकै व्यवधान छन् । हाल मध्यवर्ति र निकुञ्ज क्षेत्रका आयोजनालाई विभिन्न बहानामा सहमति नदिएको स्थिति छ ।
अर्कोतर्फ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कहिले विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) नगर्ने भन्दै बसेको हुन्छ । पिपिएमा टेक अर पे (लिउ या तिर) र टेक एन्ड पे (लिउ र तिर) को शब्दजाल फ्याँकिरहेको हुन्छ । यसरी निजी क्षेत्र परोक्षरूपमा निरुत्साहित भइरहेको छ । उदेक लाग्दो कुरो त के छ भने विभागले अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गर्दै जाने तर प्राधिकरणले पिपिए रोक्ने तथा शब्दजालमा अड्काउने अवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत ऊर्जामा लगानी घटाउने नीति ल्याएर यस क्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने शैली अपनाएको छ । बैंकले ऊर्जामा लगानी सीमा बढाउनुपर्नेमा कम गरे हुने नियम ल्याइयो । उता आयोजनामा स्थानीय तथा राजनीतिक संगठनको अवरोध र जायज–नाजायज माग हेर्दा लाग्छ, प्रवर्द्धकले गम्भीर गल्ती गरेर सजाय भोग्दैछन् । जलविद्युत क्षेत्रका लागि देशको परिस्थिति सधैँ अन्योल तथा प्रतिकूल बन्दै आएको छ । यस्तो खराब स्थितिमा पनि खोलामा पैसा खन्याएर राष्ट्रको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा टेवा पुर्याउने प्रवर्द्धकहरू धन्यका हुन् ।
सरकारले साँच्चै जलविद्युत क्षेत्रको विकास चाहेको हो भने सबै विभाग तथा निकाय आयोजनाप्रति सहयोगी हुनैपर्छ । विभागले अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गर्दै जाने, प्राधिकरणले टेक एन्ड पे र टेक अर पे को शब्दजालमा पिपिए अड्काउने नियत राख्नु भएन । पिपिएका लागि सीमा (कोटा) निर्धारण गर्ने र वन तथा निकुञ्जले सहमति र वातावरणको काम अस्वीकृत गर्ने परिपाटीले पनि यो क्षेत्रको गति रोकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले जलविद्युतमा आउने लगानी निरुत्साहित गर्ने, प्रवद्र्धकलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने र प्रवद्र्धक भने राज्यले गर्ने अन्यायको शिकार वा मुर्गा बन्दै जाने हो भने निजी क्षेत्रलाई सरकारले नै सु–साइड गर्ने स्थितिमा पुर्याएको ठहरिनेछ । यस्ता गतिविधि सरकार तथा मातहतका निकायले गर्नु उचित हुँदैन । यसले जलविद्युत विकासको लक्ष्य कहिल्यै पूरा हुदैन । राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा, २०७२ मा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएबमोजिम पिपिएमा टेक अर पे को सिद्धान्तमात्र अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा आव २०७९/८० भित्र विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयोजनाको हकमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट अनुदान दिने घोषणा छ । साथै, आव २०७४/७५ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाको हकमा यस्तो अनुदानमा १० प्रतिशत थप गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ । सरकारले यसको अक्षरसः पालना गर्नुपर्छ । प्रवर्द्धकलाई आश्वासनमात्र बाँड्नुको तुक देखिँदैन । यसै वर्ष विद्युत क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुदृढिकरण गर्ने गरी विद्युत नियमन आयोग गठन भएको छ । अब आयोगले आफूलाई परिस्कृत र सुदृढ गर्दै मातहतका निकाय र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ ।
आयोगले १० मेगावाटभन्दा साना नदी प्रवाही वा अर्धजलाशय आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको पूर्वानुमान (अभायबिलिटी अफ डिक्लेरेशन) को जानकारी गराउनुपर्ने तर यही कारण प्राधिकरणले हर्जना लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । स्वदेशी प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने सय मेगावाटसम्मका आयोजनामा यो प्रावधान लागू गरिनुपर्छ । आउटेजको विषयमा आयोग मौन बसेको देखिन्छ ।
सय मेगावाट साना आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइनका कारण ३–५ प्रतिशतभन्दा बढी आउटेजका कारण डेलिभर नभई खेर गएको ऊर्जा बापत ग्राहकको प्रत्येक बिलमा प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । आयोग जलविद्युत जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको संरचना तथा उपकरणका सम्बन्धमा सजग हुन जरुरी छ । प्रवर्द्धकलाई गुणस्तरप्रति सचेत गराउँदै अब निर्माण हुने आयोजना बत्ती बाल्ने मात्रै नभई मुनाफामुखी पनि हुनुपर्छ भन्ने निर्देशन सर्कुलर गर्नुपर्छ ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा अध्ययन अनुमतिपत्र बापतको शुल्क जति छ, वार्षिक नवीकरण दस्तुर पनि त्यति नै तिराउने नियम ल्याइयो । यस्तो नियम संसारमा कतै छैन । विभागले २०६९ साल असोज १५ गतेदेखि यसरी नै शुल्क असुल्दै आएको छ । अधिकांश साना आयोजना स्वदेशी लगानी, प्रविधि र सीपमा निर्माण हुने हुँदा आयोगले यो नियम पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।
सरकारले भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोलाई जस्तै स्वदेशीले बनाउने हरेक आयोजनास्थल जोड्ने पहुँचमार्गको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । वा यसका लागि सम्बन्धित आयोजनालाई नै बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै, आयोजनालाई दिने आयकर छुट १० वर्षबाट बढाएर २५ वर्ष पुर्याउनुपर्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले तयार गरेको ‘नेपाल पावर ट्रान्समिसन नेटवर्क म्याप’ अनुसार नदी बेसिनहरूमा प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्छ । नसके निर्माण लागत उपलब्ध गराएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सकिन्छ ।
गल्ती सबै पक्षको हुन्छ । अहिले खराब आर्थिक हैसियतमा पुगेका रुग्ण आयोजनालाई त्राण दिन तिनले गरेका कमजोरीलाई माफी दिनु उचित हुन्छ । साथै, जायज माग सम्बोधन गरी उनीहरूले निर्माण गरेका पहुँचमार्ग तथा पुल–पलेसाको खर्च भुक्तानी गरिदिनुपर्छ । सरकारले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजमा ऋण तथा अनुदान ल्याएर दिनुपर्छ । यसो हुँदा जलविद्युत, पर्यटन तथा कृषिमा ६–७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध हुन्छ । निजी आयोजना पनि सञ्चालन हुन सक्छन् । जलविद्युत तथा निर्माणसँग सम्बन्धित उपकरण तथा सेवाका लागि आउने ३–६ प्रतिशत ब्याजको विदेशी ऋण प्राथमिकता अनुसार उपलब्ध गराइदिनुपर्छ ।
अबको १० वर्षमा देशमा सञ्चालित आयोजनाको संख्या तीन सयभन्दा बढी हुन सक्छ । यति धेरै आयोजना ३५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउँदा सरकार एक्लैले स्याहार–संभार गर्न सक्दैन । यसैले, आयोजनाको स्वामित्व अन्य उद्योगसरह दीर्घकालसम्म निजी क्षेत्रमै रहने व्यवस्था अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
दुई : वित्तीय दृष्टिकोणमा परिवर्तन
सडक, पुल–पुलेसा, प्रसारण लाइन आफैले निर्माण गर्नुपर्ने, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, मूल्यबृद्धि, सामाजिक तथा राजनीतिक कारणले लागत बढेको अवस्थामा बैंकहरूले पनि आयोजनालाई निचोर्न थाले । वित्तीय संस्थाले जसरी पनि कम लागतमा निर्माण गर्नु भनिरहँदा आयोजनाको गुणस्तरप्रति कोही गम्भीर भएनन् । यो पाटो सधैं ओझेलमा पर्दै गयो । यसले प्रवर्द्धकलाई सस्तो उपकरण र संरचनामा जानुपर्ने दबाब सिर्जना गर्यो । हिजोका दिनमा वित्तीय संस्थामा सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति र विश्लेषक नहुँदा पनि जलविद्युतमा राम्रो ‘रिटर्न छ’ भन्ने अनुमानमा लगानी भएको पक्कै हो ।
सन् ६० को दशकमा चिनियाँ सस्ता टर्बाइनले राज गर्यो । जलविद्युतको आर्थिक सूचकांक कागजमा आकर्षक देखियो । कसैले गुणस्तरमा ध्यान दिएनन् । सस्ता र कमसल टर्बाइनले समग्र आयोजना सस्तो बन्यो तर बैंकको ऋण तिर्न सक्छ–सक्दैन भन्नेतिर अध्ययन गरिएन । निजी जलविद्युत आयोजनाको दुर्भाग्य यहीँबाट सुरु भयो । चीन र भारतमा निर्मित टर्बाइन सस्तोमा पाउँदा गुणस्तरीय तर महँगा युरोपियन टर्बाइन किन प्रयोग गर्ने ? आयोजना किन महँगो बनाउने भन्ने प्रश्न उठे ।
सस्ता र महँगा मेसिनबीचको अन्तर मूल्य मर्मत–संभारमा खर्च गरौं भन्ने बैंक–वित्तीय संस्था तथा केही प्रवर्द्धकमा हाबी भयो । टर्बाइनलगायत उपकरण र संरचनाहरू बैंक अध्ययन सीमाभित्र पर्छन् वा पर्दैनन् थाहा छैन । ७०–८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने वित्तीय संस्था गुणस्तरप्रति बढी संवेदनशील हुनुपर्ने तर सस्ता उपकरणले लगानी उठाउँछ या जोखिम बढाउँछ भन्नेतर्फ अध्ययन गर्न बैंक र प्रवद्र्धकहरू चुकिरहे ।
केहीले समयमै लगानी उठाइरहँदा प्रायः आयोजनाहरू डुब्दै थिए । लगानी उठाउने आयोजनाले किन, कसरी उठाए र डुब्नेहरू किन डुब्दैछन् भन्नेतिर अध्ययनै भएन । प्रवद्र्धक र बैंकहरूले भटाभट लगानी गर्दै गए । परिणाम, आज दर्दनाक र भयावह भएको छ । हिजोकै कारण बैंकले अब १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा लगानी नगर्ने भनिरहेका छन् । यो क्षेत्रमा सकेसम्म लगानी नै गर्न नपरोस् भन्दै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा लबिङ गरे । र, यसमा सफल पनि भए । राष्ट्र बैंक मानिदियो ।
पहिले बैंकहरूले ऊर्जा र पयर्टनमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्नेमा अब उद्योगसमेत थपेर त्यसको सीमा निर्धारण गरियो । राष्ट्र बैंकले जलविद्युत क्षेत्रको घाँटी निमोठिने गरी बैंकलाई सहज हुने सर्कुलर जारी गर्यो । यसको दुष्परिणाम भविष्यमा देखिने नै छ । राष्ट्र बैंकको कदम विद्युत निमयमन आयोग विनियमावली, विद्युत ऐन र निर्देशिका विरुद्ध छ । यस्ता गतिविधिले सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य केवल नारामै सीमित रहने निश्चित छ ।
संस्थागन सुशासन, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र गुणस्तरमा ध्यान नदिने हो भने १० मेगावाट त के सय मेगावाटका आयोजना समेत रुग्ण बन्नेछन् । राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउनुपर्यो । आर्थिक अनुसाशन, पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन कायम गर्न प्रवर्द्धकहरूलाई दबाब दिनुपर्यो । गुणस्तरमा ध्यान दिन सके मुनाफा आर्जन गर्न मेगावाट आयोजना नै चाहिन्छ भन्ने छैन । किलोवाटवाला आयोजनाले पनि ऋण तिरेर आकर्षक लाभांश ख्वाउन सक्छन् ।
बरु बैंक तथा प्रवद्र्धकहरूले कहीँ न कहीँ कमजोरी भयो भनेर समीक्षा गर्न जरुरी छ । सबै पक्ष सच्चिएर जलविद्युतको समग्र विकासमा लाग्दा निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान र पुनर्जागरण हुनेमा ठोकुवा गर्न सकिन्छ । सरकार र बैंकहरूले विदेशी बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण ल्याएर ऊर्जा, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । सम्बन्धित उपकरण र संरचनामा आउन सक्ने सस्तो ब्याजको विदेशी ऋण तथा डेफर्ड पेमेन्ट सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार तथा राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन एवं सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
तीन : हाइड्रोलोजी र टर्बाइन छनोट
राम्रो हाइड्रोलोजी र मजुबत गुणस्तरीय टर्बाइन एक–अर्काका पूरक हुन् । हाइड्रोलोजी राम्रो भएर कमजोर टर्बाइन पर्यो भने प्रक्षेपण गरिएझैँ विद्युत उत्पादन हुँदैन । यस्तै, टर्बाइन मात्र मजबुत भएर हाइड्रोलोजी कमजोर भए आयोजना डुब्ने डर हुन्छ । यी दुवैको मजबुतिमा बैंक, प्रवद्र्धक तथा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ । यहीँनिर, बुद्धिमता देखाउन नसक्दा आज निजी क्षेत्रका आयोजना एकपछि अर्को रुग्ण बनिरहेका छन् । हाइड्रोलोजी र टर्बाइन मजबुत भएका स्याङ्गे र पिलुवा खोलाले तीनदेखि पाँच वर्षमै लगानी उठाए । १६–१८ वर्षसम्म उत्पादन क्षमता र प्रभावकारितामा ह्रास नआई वार्षिक मुनाफा कमाइरहेका छन् ।
वास्तवमा निजी जलविद्युतको सुरुवाती पाइलो सटिक चालिएको थियो । तर, हिँड्दा हिँड्दै जानेर वा नजानेर पाइलाले बाटो बिराए । निजी क्षेत्रले ठूलो हन्डर खाएको छ । परिणाम, अधिकांश आयोजना १४ वर्षदेखि ऋणको दलदलमा फसिरहेकै छन् । जनताले जलविद्युतलाई पत्याउन छोडीसके । बैंकले पनि हिजो आफैंले गल्ती गरे र आज साना आयोजनामा लगानी नगर्ने नीति अख्तियार गर्दैछन् । सरकार निजी क्षेत्रप्रति उदासिन हुँदैछ । अब पनि चेत खुलेन र स्थिति यस्तै भइरह्यो भने निजी क्षेत्रको अवसान निश्चित छ ।
आयोजना आयमूलक र नाफामूलक बनाउन बैंक तथा प्रवर्द्धकले गुणस्तरीय उपकरण छनोट गर्न सक्ने क्षमता राख्नैपर्छ । सकेसम्म टर्बाइनको मेन्स; टर्बाइन, रनर, अल्टर्नेटर, गभर्नर, इनलेट–भल्ब, कन्ट्रोल प्यानल, स्क्याडा एउटैले डिजाइन तथा निर्माण गर्ने कम्पनी छान्नुपर्छ । एउटै कम्पनीले निर्माण गर्ने यी उपकरण सटिक इन्टरफेस भएर एकै ढिक्को जस्तो भई उच्च कार्यक्षमता र बढी टिकाउ हुन्छन् ।
यस खालका गुणस्तरीय टबाईनहरू हावा तथा पानीको प्रतिरोधपूर्ण टर्बुलेन्स कम भएका, बियरिङमा प्रतिरोध नहुने, रनर सन्तुलित हुने हुन्छन् । साथै, ऊर्जा ह्रासका लक्षणहरु जस्तै; ताप, आवाज र कम्पन कम हुने र टिकाउ हुने हुन्छन् । उत्तरआधुनिक प्रविधिको युग, विकास तथा खोज अनुसन्धानसँगै गुणस्तरीय र अत्याधुनिक उच्च प्रभावकारी उपकरण हुन्छन् । फेलसेफ रिडन्डेन्सी प्रणालीयुक्त र प्रसारण लाइनबाहेक विद्युतगृहका कारण हुने आउटेज हुन नदिने प्रविधियुक्त स्वचालित गभर्निङ तथा सिंक्रोनाइजिङ प्रणाली हुन्छ ।
टबाईनहरू प्रायः बिग्रिँदैनन् । साथै, टबाईनको उपलब्ध अनुपात बढ्न गई अपेक्षित उत्पादन सुनिश्चित हुन्छ । छिटो लगानी उठ्ने हँुदा गुणस्तरीय टबाईनको सुरु मूल्य केही महँगो भए पनि समयान्तरमा सस्तो हुन्छ । यस्तो टर्बाइनले ५–७ वर्षमा लगानी उठाउँछ । कमसल तथा सस्ता टर्बाइनले १२–१४ वर्षसम्म पनि ऋण तिरिरहेका उदाहरण छन् । सस्ता टर्बाइन कालान्तरमा गुणस्तरीयको तुलनामा कयौं गुणा महँगो हुन जान्छ ।
सस्ता टबाईनले आयोजना सस्तो बन्छ । र, निर्धारित समयमा लगानी उठ्छ भन्ने कुरा गलत पुष्टि भइसक्यो । सस्ता टर्बाइनमा बढीभन्दा बढी सहायक उपकरण आउटसोर्स गरिने हुँदा साफ्टसिल छिटो बिग्रने, मोटर ड्रिभन ओयल पम्प सिस्टम हुने हुँदा मर्मत गरिरहनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, टर्बाइन रनर, इनलेट भल्बमा समस्या आउने, अल्टर्नेटर रोटर क्र्याक तथा जेनेटरमा आगलागी हुने खतरा हुन्छ ।
सस्ता उपकरणमा बियरिङमा घर्षण बढी भई छिटो मर्मत गर्नुपर्ने, इनर्जी लस हुने लक्षण जस्तै; बढी तातिने, आवाज ठूलो आउने र बढी कम्पन हुने अवगणु हुन्छन् । यी अवगुणका कारण युरोपियन ब्रान्ड भनिएका अल्टर्नेटरमा समेत जडान भएको २ वर्षमै मर्मत गर्नुपरेको उदाहारण प्रशस्तै छन् । यस्ता उपकरणले लगानी उठाउन सक्तैनन् भन्ने प्रमाणित भइसक्यो । सरोकारवाला सबैले हाइड्रोलोजी र गुणस्तरीय उपकरणमा मात्र ध्यान पुर्याउने हो भने मुनाफा कमाउन ‘मेगा आयोजना’ चाहिँदैन । कहिल्यै रुग्ण हुने अवस्था आउँदैन ।